Dadka laga soo daadgureeyay Afghanistan ayaa laga helay Uganda: Maxay hoteellada ugu faraxsan yihiin?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Dadka laga soo daadgureeyay Afghanistan ayaa laga helay Uganda: Maxay hoteellada ugu faraxsan yihiin?
Wararka Afgaanistaan • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Afganistan oo laga soo daadgureeyay Uganda
Dowladda Uganda ayaa saakay, Ogosto 25, 2021, qaabilay 51 ka mid ah 2,000 oo qaxooti la filayay oo ka yimid Afgaanistaan ​​kuwaas oo soo gaaray diyaarad si khaas ah u kireysatay oo ku taal Garoonka Caalamiga ah ee Entebbe.
Huteelada ku yaal Entebbe waxay filayaan duufaan ka timaadda ballansashada tan iyo markii heerarka deggenaanshaha hoos loo dhigay ka dib masiibada COVID-19 ee 2020.
Hawl-wadeennada ayaa maray baadhitaanka amniga ee lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale baadhitaanka khasabka ah ee COVID-19 iyo hababka karantiil ee loo baahan yahay.
Dadka laga soo daadgureeyay Uganda ee la qorsheeyay in ay ku safraan diyaaradda ayaa awoodi waayay in ay gaaraan sababo la xiriira caqabadaha galaya garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Tani waxay daba socotaa codsi ka yimid Dowladda Mareykanka iyo aqbalaadda Dowladda Uganda ee ah inay si kumeel gaar ah u martigeliso Muwaadiniinta Afgaanistaan ​​ee ku sii jeedda Mareykanka iyo meelaha kale ee adduunka oo dhan ka dib la wareegitaanka dawladda Afgaanistaan ​​ee Taliban.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kampala ayaa qeyb ahaan u qornaa:
“Uganda iyo Mareykanka waxay leeyihiin xiriir soo jireen ah iyo xiriir laba geesood ah oo ah mid taariikhi ah waxayna sii wadaan inay fuliyaan danaha guud si ay labada dalba uga faa’ideystaan. Go’aanka lagu martigalinayo dadka u baahan waxaa wargelinaya mas’uuliyadda Dowladda Uganda ee arrimaha khuseeya caalamka. ”
Dhamaystirka tilmaamaha Dowladda Uganda, safaaradda Mareykanka ee Uganda tweeted: “Dadka reer Uganda waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah inay soo dhaweeyaan qaxootiga iyo bulshooyinka kale ee u baahan. Maaddaama ay tahay taageeraha ugu badan ee laba geesoodka ah ee qaxootiga Uganda iyo bulshooyinka ay martida u yihiin ee Uganda, Mareykanka wuxuu u muujiyaa qaddarinta dadka Uganda. Dowladda Uganda ayaa mar kale muujisay rabitaankeeda ah inay kaalinteeda ka qaadato arrimaha khuseeya caalamka. Waxaan bogaadinaynaa dadaalkeeda iyo kuwa ururada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee Uganda… ”
Dadka la daadgureeyay, oo ay ku jiraan rag, haween, iyo carruur, ayaa maray baaritaankii amniga ee loo baahnaa iyo sidoo kale baaritaanka khasabka ah ee COVID-19 iyo hababka karantiil ee loo baahan yahay.
Dadka Uganda laga soo daadgureeyay ee qorshuhu ahaa in ay ku safraan diyaaradda ayaa awoodi waayay in ay gaaraan sababo la xiriira caqabadaha soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Kahor imaanshahooda, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Uganda Gen. Jeje Odongo markii la weydiiyay cidda bixin doonta qarashka daryeelkooda wareysi telefishanka laga sii daayay Larry Madowoon, CNN, wuxuu lahaa sidan oo kale, “Waan ognahay dhibaatada qaxootiga, iyo ummad ku dhex jirta beel ka mid ah ummadaha, waxaa naga saaran mas'uuliyad beesha caalamka ah, tilmaamaheena iyo wada -hadalkeenu illaa hadda waxay muujinayaan in Ameerika ay qaadi doonto mas'uuliyadda. ”
Huteelada Entebbe ayaa filaya in dabayshu ka iman doonto ballansashada tan iyo markii heerka degganaanshuhu hoos u dhacay ka dib faafitaanka COVID-19 ee 2020. Carol Natkunda, oo ah mulkiilaha Askay Hotel Entebbe, ayaa rajo wanaagsan ka muujisay in hudheelkeedu heli doono martidan gaarka ah eTurboNews in ay mar walba meel -mariyeen dhammaan Habraacyadii Hawlgalka Heerka ee lagama maarmaanka u ahaa tan iyo bilowgii masiibada.
Uganda waxay isu beddeshay inay noqoto isha oo waxay marti u tahay tirada ugu badan ee qaxooti ku ah Afrika - illaa 1.5 milyan - oo inta badan ka yimid Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo (DRC), Burundi, iyo Soomaaliya.
Halgankii lagaga soo horjeeday nidaamkii midab -kala -sooca ee Koonfur Afrika sannadkii 1989 -kii, Dawladda Uganda waxay saldhig u fidisay qurba -joogga Koonfur Afrika oo saldhig u samaystay inay ku noolaadaan dagaalyahannada xorriyadda (Umkonto we Sizwe) ee Golaha Qaranka Afrika (ANC). Afar iyo toban ka mid ah dagaalyahannada ayaa weli lagu dhex-dhexaadinayaa dugsiga Oliver Reginald Tambo ANC Leadership, Kaweweta.
Ilaa iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka markii Jarmal Blitzkrieg uu qabsaday Yurub inteeda badan, 7,000 oo Polish ah - oo u badan haween iyo carruur qaxooti ah - ayaa lagu qasbay inay magangelyo ka raadsadaan Nyabyeya ee Degmada Masindi iyo Koja (Mpunge) oo ku taal Degmada Mukono oo ku taal Maxmiyadda Ingiriiska ee Uganda. Waa wax aan caadi ahayn in la arko qaraabadooda qiirada leh iyo faracooda oo xushmad ka siinaya qabuuraha eheladooda oo lagu aasay Uganda.